Home News MW Sharif Xassan oo dhibaato kala kulmay magaalada Neyroobo? waa maxay dhibkaas?
MW Sharif Xassan oo dhibaato kala kulmay magaalada Neyroobo? waa maxay dhibkaas?
Wararka ka soo gaaraya MOL magaalada Neeyroobi ayaa sheegaya in Madaxweynaha Dowalda Goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xassan Sheekh Adan oo labo maalin ka hor tagay magaalada Neyroobi ee dalka Kenya in hoteelkiisa loogu dhacay, lacag iyo dukameentigii oo watayna laga dhacay. MOL waxa ayaa la xirirtay qaar ka mida wafdiga la socday Madaxweynaha waxaana ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan wixii dhacay laakiin waxa ay u qaxiijiyeen MOL in MW Sharif Xassan la isku dayay in la dhibaateeyo haddana ay ku daba jiraan hay’addaha amniga ee dalka Kenya.
Wixii ka soo kordho aritaan gadaal ayaanu idinkaaga soo sheegi doonaa.
Previous articleDowlada Maraykanka oo Shaacisay In Laga Adkaaday Daacish
Next articleWaziir Beyle oo La Kulmay Wafdi Ka Socday Bangiga Aduunka
10 al-Shabaab militants killed in Somalia explosion: State media
Ilaalada Xarunta Xalane oo La Kordhiyay iyo Cabsi Ka Tagan Xeradaasi